Torbee darbe kana qofa Keeniyaatti ogeeyyiin yaala fayyaa kudhan Vaayressii Kooronaan faalamanii du’anii jiru. Kurneen kana keessaa afur jimaata darbe kana guyyaa tokkotti ka lubbuun darbe yoo tahu, wanni kun waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa biratti dheekkamsa kaaseera.
Keeniyaatti Torban tokko keessatti Dookteronni 10 COVID –19 Du’uun Dheekkamsa Kaase
Dr. Chibaanzii Mwaachoondaa; Itti Aanaan Barreessaa waldichaa lubbuun dookterota kana kan darbe sababa mootummaan eeggannoo malu taasisuufii dhiisee jechuun kimii jiru dubbatan.
Dr Mwaachoondaan duuti ogeeyyii kanaa kan nama himanii, amma hospitaala kutaalee bulchiinsaa gara garaa keessa jiranittis hanqinni Oksijiini akka jiru eeran.
“Osoo waan tokkoo hin raawwatin ji’a saddeet guutuu afaaniin dubbachuun faayidaa takka hin qabu. Keessumaa oduun ‘bakka dhukkubsatoonni Vaayresii Kooronaa itti adda baafaman’ odeeffamu martuu dhara. Dooktoroota yaalaa dabalataa qacaruun itti fufuu qaba, ministeerri fayyaas Hagayya darbe dookteroota 188 qacaruu himee ture, garuu, jarri kun haga yoonaa miindaan hin kaffalamneef, walii galtee gabaabaan hojii kana hojjetaa jiru, Inshuraansii fayyaallee hin qabanii rakkoo keessa jiru. Kana kan irratti raawwataa jirus, angawoota mootummaati” jedhu.
Dr. Mwaachoondaan mootummaan xinnaatu kutaalee bulchiinsaa biyyattii keessa jiran tokkoon tokkoof Dookteroota fayyaa 50 akka qacaru gaafatanii jiru. Dr. Samuel Onoko; dura taa’aan waldaa ogeeyyii yaala fayya Keeniyaas duuti dooktoorota fayyaa hanqina meeshaalee of eeggannoo hospitaala keessa jirurraa kan dhufe jedhan. Kanaaf mootummaan waan waldaan Hakiimotaa kun gaafate guutuu baannaan Mudde jalqabarraa kaasee hojii dhaabuuf akka dirqaman akeekakchiisan.
Waldaan Ogeeyyii Fayyaa keeniyaa hojii itti fufuuf guutamuu qabu jechaan ka gaafatan waantota 11. Isaan keessaas, ogeeyyiin fayyaa inshuraansii fayyaa akka argatan, meeshaaleen barbaachisoon akka dhiyaataniif, warri qacarame miindaan akka kaffalamuuf, ogeeyyiin fayyaa dabalataas hospitaalota keessatti akka qacaraman ka jedhan warreen hangafa.
Dr. Chibaanzii Mwaachoondaa; Itti Aanaan Barreessaa waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa kun nuuf guutuu baannaan torbee muraasa keessatti ogeeyyiin fayyaa Keeniyaa hojii ni dhaabu jechaan akeekkachiisan.
Mootummaan biyyattii garuu komii kana furuufan itti jira jedha. Dr. Meersii Mwaangaangii; Kaabineen Ministeera fayyaa keeniyaa Mootummaan bakka bu’oota waldaalee kana waliin mariirra jira jedhan. Dhiyeenyas hospitaalota keessa hanqinni dhiyeessa meeshaalee akka jiru bira geenyeerra, sana ni furra, ogeeyyii fayyaa dabalatee hojjetootni mootummaa Inshuraansii fayyaa akka argatanis murtaayeera jedhan.
Filatamaan prezidaantummaa Joo Baayiden Lammiiwwan Ameerikaa Vaayiresii Koronaa Ittisuuf Cicha Qaban Akka Itti Fufan Waamicha Dabarsan